ကျနော်တို့ကတော့ အကြမ်း …………သူတို့ကတော့အချော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ကျနော်တို့ကတော့ အကြမ်း …………သူတို့ကတော့အချော
ကျနော်တို့ကတော့ အကြမ်း …………သူတို့ကတော့အချော
Posted by ကိုေပါက္(မႏၱေလး) on Jun 20, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 13 comments
1 လမ်းဘေးမှာ ပုံထားတဲ့ သစ်အကြမ်းပုံ(မြန်မာပြည်ကလာတာ .............2010 ကတည်းကရောက်နေတာ)
2 လမ်းဘေးက အချောမကိုင်ရသေးတဲ့သစ်ပင်
3 လမ်းဘေးမှာချထားတာ မိုးရွာအစိုနေပူအခြောက်ဘဲ
5 ဒါကနောက်က မြင်ရတာပါ
6 တောင်ဘက်ခြမ်းက နောက်ထပ် ခြင်္သေ့တစ်ကောင်
7တောင်ဘက်က ကောင်ကြီးကို နောက်ကမြင်ရတာ
8 ခြင်္သေ့ကြီးဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာ ယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင်
9 တောင်ဘက်က ခြင်္သေ့ကို အဝေးကအကြည့်
10 ခြင်္သေ့တွေထားတဲ့ ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ကြီး
11 ဒီဆင်နှစ်ကောင်က ကျနော်တို့လဲမန်းလေးသားဗျ လို့ ကျနော်ကို လှမ်းပြောသဗျာ
12 နက်ပြောင်လှပ သစ်မြစ်ဆုံကြီးကိုအချောက်ိုင်ထားတာပါ
13 အခုလောလောဆယ်တော့ ဒီအတိုင်းခဏနောက်နောက်တော့အလှပြင်ပေးမယ်
14 သူကလဲမပြုပြင်ရသေးတဲ့ အရိုင်းကလေးပါ
15 သူလဲ မိတ်ကပ်မလိ်မ်းရသေးဘူး
16 ဒီလိုအကြမ်းထည်ကနေ ဈေးကြီးတဲ့ အချောထည်ဖြစ်သွားတာပါဘဲ
17 သစ်ပင်လိန်နေပုံက တကယ်လှပ ပါတယ်
18 အိမ်ထဲမှာ ထည့်ထားတာပါ အဝေးကလှမ်းရိုက်တာ နည်းနည်းဝါးသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်
“ကျနော်တို့က အကြမ်း သူတို့ကအချော”
2010 မှာရွှေလီကို ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်တော့ ကျယ်ဂေါင်ဘက်ကနေလာတဲ့တံတားထိပ်နားလေးက
မြေကွက်လပ်မှာ သစ်မြစ်ဆုံတွေ သစ်တုံးတွေအပုံလိုက်။
သူနဲ့မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာက ပန်းပုလုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံ။
အခု2012 ရောက်ပြန်တော့ အဲဒီသစ်ပုံကြီးက မကုန်သေးပါဘူး။
အဲဒီတံတားကနေ မြောက်ဘက်လမ်းကျယ်ဘက်ကွေ့လိုက်တော့ ကျောက်မျက်ဈေးတန်း
ဟိုမြောက်ဘက် အတော်ဝေးဝေးမှာတော့ထုလက်စ တစ်ကောင်။
နောက်ဆိုင်တစ်ခုရဲ့အဝင်ဝမှာ ဟိုတယ်အဝင်ဝမှာ ဆင်ရုပ်ကလေးတွေ။
သိတာပေါ့ သူတိုကို မန်းလေးမြိုတောင်ဘက်ကပ်ကျော်ကွေ့ကနေအရှေ့တက်ရင်
ရွှေကွန်အုပ်ဘုရားကို မရောက်ခင်အိမ်ကြီးမှာ ဆင်ရုပ်တွေထုနေတာ ကိုး။
ကျနော်သွားလေရာမှာ သစ်ပင်နဲ့ထုထားတဲ့ပန်းပုရုပ်မြင်တိုင်း ငါတို့ဟာတွေလို့
ကျနော်တို့ က အမြဲတမ်းကုန်ကြမ်းအဆင့်မှာဘဲရပ်တည်ကြတော့မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကလဲ
ငယ်ငယ်တုံးက အကိုကြီးတစ်ယောက်ပြောခဲ့တာကို ပြန်သတိရမိတယ်။
“ငါတို့တောသူတောင်သားတွေက မြေကိုထွန်ယက်ပြီး ပြောင်းဖူးစိုက်
မြိုကသူဌေးတွေက ငါတို့ပြောင်းဖူးနဲ့လုပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားမုန့်ကို ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်စား”
အဲတော့ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင် ကျနော်တို့ ဆင်းရဲတွင်းထဲက မတက်နို်င်ဘူးထင်ပါတယ်။
ကြောင်အကြီးကြီးရုပ်တုများရော တွေ့ဃဲ့ဗူးလားဗြ..။ အဲလို ခွဲဂျားခွဲဂျား လုပ်ပါနဲ့..။ ကျုပ်တို့လည်း မြန်မာထီးကြမ်းပို့ပီး တရုတ်မချော ပျံယူဂျစို့… ယူကွာ တယောက်လေးယောက်နှုန်း…။ လေးယောက်ပြည့်မှ ဘာသာပျံပျောင်းဂျ..။
ကြောင်ကြီးရေ စဉ်းစားပါကွယ် မင်းနစ်နာနေပါအုံးမယ်။
ဒီလိုလက်ရာမျိုး မြန်မာပြည်မှာ ရှိဦးတော့
ထင်းမဖြစ်သွားတာ တော်သေးလို့ ဆိုရတော့မယ်…
အဲ့လောက် တော့ မကြီးဘူး .. ရှိပါတယ် .. နာဂစ်အလွန် ဆိုပြီး .. ဆရာစံ လမ်း နဲ့ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းသစ် ထောင့် မှာ ဂိုထောင် နဲ့ လဲ ထားတယ် လမ်းပေါ် မှာလဲ ထားတယ် .. အဲ့ .. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် . လက်ရာကတော့ နဲနဲ ကွာတယ်ဗျ …
ဦးကြီးက ပေါက်ဖော်ကြီးကို မန်ကျီးသီးတပိသာ ၅၀ဝ ကျပ် နဲ့ရောင်း။ ပေါက်ဖော်ကြီးက မန်ကျီးသီး တပိသာကို မန်ကျီးဖျော်ရည်ဘူး ၅၀ဝ ထွက်အောင်ပြုပြင်။ တဘူး ၅၀ဝ ကျပ် နဲ့ပြန်ရောင်း။ ပေါက်ဖော်ကြီး ထုပ်တဲ့ မန်ကျီးဖျော် ရည်ဘူးကို ဦးကြီးက ၅၀ဝ ကျပ် နဲ့ပြန်ဝယ်သောက်။ အဲလိုဖြစ်နေပြီလေးပေါက်ရေ။ ကြားဖူးတဲ့ဟာသလေးပါ။
အဲဒီကိစ္စ ဆရာအော်ပီကျယ်လည်း စာပေဟောပြောပွဲတွေမှာ ထည့်ထည့်ပြောတယ်
အသိပညာပေါင်းလိုက်တော့ တန်ဖိုးက အသိပညာကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းသွားတာမျိုးပေ့ါ
ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းကလည်းပြောပါတယ် (သဘာဝ + လုပ်အား = တန်ဖိုး)တဲ့
ဒါနဲ့ ခြင်္သေ့ရုပ်ထုတားတဲ့ သစ်ပင်ကြီးဆို တော်တော်ကြီးမှာနော်
သစ်မြစ် ကြီးတွေ ကြည့် ပြီး ဘာ ကို နှ မြောမှန်းမသိ နှမြောနေတယ်။ ကိုယ့် နိုင်ငံက ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အရင်း အမြစ်တွေ အတွက်လား၊ သူတို့ တွေလို တန်ရာတန်ဘိုးရ တဲ့ အထိ မစောင့် နိုင်၊ မဖန်တီး နိုင်တဲ့ အခြေအနေ တွေကိုလား ဝေခွဲမရ။ ကိုယ့် လူတွေ ကလည်း သေပြီးအပင်ရဲ့အမြစ် မပြော နဲ့ စိမ်းစို ရှင်သန်နေ တဲ့ အပင် တောင် အမြစ်က နှုတ်ပြီး ရောင်း ကြ တာကိုး။
ဈေးကတော့ မမေးရဲဘူးမောင် ။
ဒီထက်ပို ချဲ ့ကြည့်ချင်မိသား
မောင်ပေ ချဲ့ကြည့်ချင်လို့ မရဘူး ။.
သူတို့က အိမ်ထဲမှာ ဖဲရိုက်နေကြတာ။